Gudoomiyihii degmada Yaakhshiid Muxudiin Jurrus oo xilka laga qaaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Gudoomiyihii degmada Yaakhshiid Muxuduun Xasan Jurrus ayaa xilka laga qaaday, wuxuuna manta xilkaas si rasmi ah ugu wareejiyey gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay degmadaas Cusmaan Maxamed Cadaawe.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Muungaab ayaa xilka ka qaaday gudoomiyihii hore ee degmadaas Muxudiin Jurrus, kaasoo xilkaas qabtay intii ay jirtay dowladdii KMG aheyd ee uu hogaaminayey madaxweynihii hore ee geeriyooday Col. C/llaahi Yuusuf Axmed.
Munaasabadda ka dhacday degmada Yaakhshiid oo xilka lagu kala wareegayey ayaa waxaa ka hadlay mid ka mid ah odoyaasha dhaqanka ee degmada, kaasi oo sheegay inay aad u soo dhaweynayaan maamulka cusub ee degmada Yaaqshiid loo soo magacaabay, isagoo maamulkii hore uga mahadceliyay waxyaabihii u qabsoomay, ayna diyaar u yihiin inay la shaqeyaan maamulka cusub.
Guddoomiyihii hore ee degmada Yaaqshiid, Muxudiin Xasan Jurus oo ka hadlay munaasabadda xil wareejinta ayaa ka shakeeyay waxyaabihii u qabsoomay intii uu xilka hayay, wuxuuna sheegay in uu ku faraxsanyahay isbadalka socda uuna diyaar u yahay la shaqeynta maamulka cusub.
Guddoomiyaha cusub ee degmada Yaaqshiid, Cismaan Maxamed Cadaawe ayaa sheegay in maamulkii isaga ka horeeyay uu uga mahadcelinayo waxyaabihii u qabsoomay.
Gudoomiyaha cusub ayaa sheegay in qorshayaasha uu hiigsan doono oo ay ugu horeyso xoojinta amniga, ka shaqeynta horumarinta adeegyada bulshada, waxaana u shacabka ka codsaday in ay gacan ku siiyaan gudashada waajibaadka loo igmaday.
Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Benaadir ee dhanka arrimaha bulshada, Iimaan Nuur Iikar oo gabo gabadii xafladda hadal ka jeediyay ayaa ku booriyay maamulka cusub ee degmada in uu la yimaado isbadal muuqdo.
Gudoomiyaha cusub ee degmada Yaakhshiid, Cusmaan Maxamed Cadaawe ayaa ah nin dhallinyaro ah oo shahaadada Masterka kusoo diyaariyey dalka Masar.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir, Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa xilka ka qaaday 15 ka mid ah gudoomiyaashii degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana weli aan xilka laga qaadin hal gudoomiye degmo ah: gudoomiyaha degmada Howlwadaag, Maxamed Abuukar (Jacfar).